446s Ny fahazoana am-bava nify laminated vaovao (ao anatin&#39;ny telo ora heh) laminate-Edward Avila images and subtitles
Manaova meolning Ankehitriny ~ ~ ~ ~ kiraro roa Niaraka amin'i Leo Jay ~! ~ Miarahaba, ianao Sul ^ ^ Ry lahy, olon-drehetra - Izaho no Leo J. Mianara teny anglisy amin'izao andro izao Ka ny robot toa ny robot Tena reraka, matory sy rendremana noho ny tsy fahampian-torimaso izao. Izahay izao Any amin'ny mpitsabo nify telo andro aho. 3 ora Noheveriko fa tsy maninona ho an'ny nifiko ?? ㄴㄴ; Tena tsara ny masonao ?? Tena tsy nilaza an'izany mihitsy aho ary nilaza fotsiny aho fa tsy ratsy izany Nilaza izy fa natao kitoatoa sy mavo Ary inona koa no lazainao? Nilaza aho fa toa izany Right? Nilaza aho fa tsy ampy izy io Ankehitriny dia corona Noho izany, manandrana Ny foto-keviny dia afaka mihinana laminate ao anatin'ny adiny telo. Toa eo amin'ny 3 ora eo ho eo izao indray izy io Klinika 3 ora Saingy tsy haiko raha hisy fiovana lehibe Tsy nampiasa lipstick pastel aho Raha mampihatra izany ianao dia mihamafana ny voloo Mino aho fa ㅋㅋ Madonna * Lipstick Maybelline * ㅋㅋㅋ mavo Damn anao? Sahala amin'ny akondro Mifanatrika Asehoy ahy ny nifinao Fotsy be ny eo afovoanao Mavo amin'ny faran'ny farany Gyeokgong Izay nolazain'ilay dokotera Tena mafy be io Ary ny tsipika Tsy zezika sy milamina io. Ka ho hitiko Ary na dia ny loko ny nify Voalohany indrindra aloha dia nieritreritra aho fa mila mikapoka ny nifiko rehetra Fa izao, amin'ny ahy Tahaka ny tendron-drà iray Dashing Diva. Taorian'ny amboa kely tany ivelany Somary kely eo ambony Raha tokony hitafy ny prosthesis (tsy nahatadidy an'i Crown) aho Raha ny marina, heveriko fa ny nify ambany no olana lehibe indrindra Hitako izany rehefa miteny aho Saingy tokony hanitsy izany ve aho? Ah, toa tsy mitondra balsama izy Ny zavatra manamboatra nify dia rakotra menaka hamandoana ao anatiny, ka maharitra tsara izany :) (Fa) * Gel anesthesia + aorian'ny fanadiovana ampahany Ny bikako: Ny feoko: Talohan'izay Ary rehefa afaka izany Jjeolji Toa toy ny matotra manika ;; Heveriko fa afaka mametraka zavatra eo amboniny aho Toa manao ny asan'ny prostetik ianao Ampio aho mandra-pahavitan'izany ... mijanona fotsiny ... Tokony handeha mody ihany aho? Nefa tsy nandeha Malalaka hanao izay rehetra ataonao mandritra ny adiny telo Mipetraha mipetraka ao anaty lalantsara na mandeha any ivelany hividy na hihinana zavatra Fa Tiako ny matory Tena Im Izany hoe, 3 ora dia tsy nandalo 7 ora lasa izay Miverina aho ary mahatsiaro vaovao !!! Mahatsapa madio sy mazava kristaly aho izao Neongdam Inona no mahasamihafa? Herinandro iray io Tsapanao ho ahy izao? Efa zatra an'io aho Aza mieritreritra hoe misy zavatra eo amin'ny nifinao Hanandrana vokatra molotra vitsivitsy aho Hitanao ao ambany ambany ny nify Ary rehefa mandinika ilay vokatra voalohany amin'ny molotra Tsy nihomehy tsara aho. Toy izao hatrany Handeha miloko matanjaka aho ary hametraka zavatra hafahafa ao Tsy amin'ny filaminana manokana fotsiny Malala Dalia Blooming Edition Lip Paradise Sheer Dew Tinted Lipstick Lokon'ny Olivia K-beauty dia manenjika olona marobe Ny anarana loko dia anaran'ny zazavavy fotsy hoditra rehetra Na dia milaza aza ny lokony io, tsy haiko hoe mazàna izany Ao no alehanao Olivia sy Brenda na Shallot O ... Bright Io marika antsoina hoe Hens Iray amin'ireo marika K-beauty vaovao izy io Amin'ity andro ity, ny tanora dia tia azy Lokon'ny 'Soft Demand' Ity no innisfree Ny ranomainty vita amin'ny landy Tavy beige vita Mitovy ny loko rehetra. Farany, Andao isika hijery zavatra mahafinaritra amin'ity indray mitoraka ity. Ndao hataon'ity Sailor Moon ~ ity! Sailor Moon X Color Pop Collection Lokon'ny 'Usagi' Tsy misy kansera ao anatiny
Ny fahazoana am-bava nify laminated vaovao (ao anatin&#39;ny telo ora heh) laminate-Edward Avila
< start="0" dur="0.98"> Manaova meolning >
< start="0.98" dur="3.72"> Ankehitriny ~ ~ ~ ~ kiraro roa >
< start="5.12" dur="1.7"> Niaraka amin'i Leo Jay ~! ~ >
< start="6.82" dur="1.4"> Miarahaba, ianao Sul ^ ^ >
< start="9.2" dur="1.96"> Ry lahy, olon-drehetra - Izaho no Leo J. >
< start="12.86" dur="1.94"> Mianara teny anglisy amin'izao andro izao >
< start="14.8" dur="2.24"> Ka ny robot toa ny robot >
< start="17.04" dur="4.5"> Tena reraka, matory sy rendremana noho ny tsy fahampian-torimaso izao. >
< start="21.54" dur="1.18"> Izahay izao >
< start="23.14" dur="1.62"> Any amin'ny mpitsabo nify telo andro aho. >
< start="27.2" dur="0.76"> 3 ora >
< start="28.36" dur="1.7"> Noheveriko fa tsy maninona ho an'ny nifiko ?? >
< start="38.56" dur="1.68"> Tena tsara ny masonao ?? >
< start="40.24" dur="2.18"> Tena tsy nilaza an'izany mihitsy aho ary nilaza fotsiny aho fa tsy ratsy izany >
< start="42.42" dur="3.34"> Nilaza izy fa natao kitoatoa sy mavo >
< start="50.16" dur="2.1"> Ary inona koa no lazainao? >
< start="53.32" dur="1.2"> Nilaza aho fa toa izany >
< start="55.02" dur="1.46"> Nilaza aho fa tsy ampy izy io >
< start="57.9" dur="0.9"> Ankehitriny dia corona >
< start="58.8" dur="1.16"> Noho izany, manandrana >
< start="59.96" dur="4.72"> Ny foto-keviny dia afaka mihinana laminate ao anatin'ny adiny telo. >
< start="64.68" dur="1.96"> Toa eo amin'ny 3 ora eo ho eo izao indray izy io >
< start="69.54" dur="1.86"> Klinika 3 ora >
< start="75.98" dur="3.42"> Saingy tsy haiko raha hisy fiovana lehibe >
< start="80.96" dur="1.98"> Tsy nampiasa lipstick pastel aho >
< start="85.38" dur="2.46"> Raha mampihatra izany ianao dia mihamafana ny voloo >
< start="101.76" dur="1.12"> Mino aho fa ㅋㅋ Madonna >
< start="107.12" dur="2.34"> ㅋㅋㅋ mavo Damn anao? Sahala amin'ny akondro >
< start="109.46" dur="0.96"> Mifanatrika >
< start="114.96" dur="0.58"> Asehoy ahy ny nifinao >
< start="117.46" dur="3.28"> Fotsy be ny eo afovoanao >
< start="120.74" dur="1.56"> Mavo amin'ny faran'ny farany >
< start="147.86" dur="1.3"> Izay nolazain'ilay dokotera >
< start="151.24" dur="1.4"> Tena mafy be io >
< start="152.64" dur="1.94"> Ary ny tsipika >
< start="156.06" dur="2.6"> Tsy zezika sy milamina io. >
< start="158.66" dur="1.62"> Ka ho hitiko >
< start="160.28" dur="2.58"> Ary na dia ny loko ny nify >
< start="162.86" dur="6.38"> Voalohany indrindra aloha dia nieritreritra aho fa mila mikapoka ny nifiko rehetra >
< start="169.24" dur="2.16"> Fa izao, amin'ny ahy >
< start="171.4" dur="4.32"> Tahaka ny tendron-drà iray Dashing Diva. >
< start="175.72" dur="2.12"> Taorian'ny amboa kely tany ivelany >
< start="177.84" dur="1.82"> Somary kely eo ambony >
< start="179.66" dur="1.7"> Raha tokony hitafy ny prosthesis (tsy nahatadidy an'i Crown) aho >
< start="181.36" dur="3.5"> Raha ny marina, heveriko fa ny nify ambany no olana lehibe indrindra >
< start="184.86" dur="2.06"> Hitako izany rehefa miteny aho >
< start="186.92" dur="2.88"> Saingy tokony hanitsy izany ve aho? >
< start="189.8" dur="1.72"> Ah, toa tsy mitondra balsama izy >
< start="194.98" dur="2.6"> Ny zavatra manamboatra nify dia rakotra menaka hamandoana ao anatiny, ka maharitra tsara izany :) >
< start="197.58" dur="0.84"> (Fa) >
< start="204.7" dur="2.84"> * Gel anesthesia + aorian'ny fanadiovana ampahany >
< start="207.54" dur="1.6"> Ny bikako: >
< start="209.14" dur="1.64"> Ny feoko: >
< start="210.78" dur="1.64"> Talohan'izay >
< start="212.86" dur="1.12"> Ary rehefa afaka izany >
< start="215.64" dur="1.74"> Toa toy ny matotra manika ;; >
< start="217.38" dur="2.06"> Heveriko fa afaka mametraka zavatra eo amboniny aho >
< start="220.02" dur="1.94"> Toa manao ny asan'ny prostetik ianao >
< start="222.52" dur="2.72"> Ampio aho mandra-pahavitan'izany ... mijanona fotsiny ... >
< start="225.24" dur="0.94"> Tokony handeha mody ihany aho? >
< start="226.18" dur="2.06"> Nefa tsy nandeha >
< start="228.24" dur="2.88"> Malalaka hanao izay rehetra ataonao mandritra ny adiny telo >
< start="231.12" dur="3.68"> Mipetraha mipetraka ao anaty lalantsara na mandeha any ivelany hividy na hihinana zavatra >
< start="234.8" dur="2.64"> Fa >
< start="237.44" dur="2.06"> Tiako ny matory >
< start="239.5" dur="0.94"> Tena Im >
< start="250.58" dur="2.32"> Izany hoe, 3 ora dia tsy nandalo >
< start="252.9" dur="1.98"> 7 ora lasa izay >
< start="254.88" dur="3.12"> Miverina aho ary mahatsiaro vaovao !!! >
< start="275.68" dur="2.3"> Mahatsapa madio sy mazava kristaly aho izao >
< start="310.02" dur="1.84"> Inona no mahasamihafa? >
< start="312.66" dur="1.12"> Herinandro iray io >
< start="313.78" dur="2.14"> Tsapanao ho ahy izao? Efa zatra an'io aho >
< start="315.92" dur="2.52"> Aza mieritreritra hoe misy zavatra eo amin'ny nifinao >
< start="318.44" dur="2.06"> Hanandrana vokatra molotra vitsivitsy aho >
< start="320.5" dur="2.4"> Hitanao ao ambany ambany ny nify >
< start="322.9" dur="2.64"> Ary rehefa mandinika ilay vokatra voalohany amin'ny molotra >
< start="325.54" dur="2.44"> Tsy nihomehy tsara aho. >
< start="327.98" dur="1.04"> Toy izao hatrany >
< start="331.58" dur="3.18"> Handeha miloko matanjaka aho ary hametraka zavatra hafahafa ao >
< start="334.76" dur="1.16"> Tsy amin'ny filaminana manokana fotsiny >
< start="335.92" dur="4.08"> Malala Dalia Blooming Edition Lip Paradise Sheer Dew Tinted Lipstick >
< start="340.6" dur="0.8"> Lokon'ny Olivia >
< start="341.4" dur="2.66"> K-beauty dia manenjika olona marobe >
< start="344.06" dur="3.66"> Ny anarana loko dia anaran'ny zazavavy fotsy hoditra rehetra >
< start="347.72" dur="2.64"> Na dia milaza aza ny lokony io, tsy haiko hoe mazàna izany >
< start="350.36" dur="0.68"> Ao no alehanao >
< start="351.04" dur="0.62"> Olivia sy >
< start="351.66" dur="0.96"> Brenda na >
< start="357.8" dur="1.6"> O ... >
< start="372.2" dur="1.66"> Io marika antsoina hoe Hens >
< start="373.86" dur="2.18"> Iray amin'ireo marika K-beauty vaovao izy io >
< start="376.04" dur="2.9"> Amin'ity andro ity, ny tanora dia tia azy >
< start="378.94" dur="2.76"> Lokon'ny 'Soft Demand' >
< start="395.2" dur="1.52"> Ity no innisfree >
< start="396.72" dur="2.56"> Ny ranomainty vita amin'ny landy >
< start="399.28" dur="2.34"> Tavy beige vita >
< start="406.14" dur="1.92"> Mitovy ny loko rehetra. >
< start="420.9" dur="0.76"> Farany, >
< start="421.66" dur="1.32"> Andao isika hijery zavatra mahafinaritra amin'ity indray mitoraka ity. >
< start="422.98" dur="1.22"> Ndao hataon'ity Sailor Moon ~ ity! >
< start="427.44" dur="0.88"> Lokon'ny 'Usagi' >
< start="444.02" dur="1.92"> Tsy misy kansera ao anatiny >